I-Chrome 90 iza nokuthuthuka kwamathebhu, ukuphepha nokuningi | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule Ithimba lokuthuthukisa leGoogle Chrome limemezele ukukhishwa kwe- inguqulo ezinzile yeGoogle Chrome 90, lapho izindaba ezinkulu, futhi ikakhulukazi okulindeleke kakhulu kule nguqulo, ngu ukusebenza okuvumela isiphequluli ukuthi sixhumeke kuzinguqulo ze-HTTPS yama-URL ewebhusayithi akhonjiswa kubha yekheli.
Ngokusekela i-HTTPS ngokuzenzakalela, lesi sici esisha ku-Google Chrome 90 kulindeleke ukuthi sithuthukise ubumfihlo bomsebenzisi kanye nesivinini sokulayisha samawebhusayithi asekela le protocol.
Enye into entsha okugqame kule nguqulo entsha, yi- amandla okunikeza amalebula ahlukile kumawindi ukuze awahlukanise ngokubonakalayo kwiphaneli yedeskithophu. Ukwesekwa kokuqanjwa kabusha kwamawindi kuzokwenza lula ukuhleleka komsebenzi lapho usebenzisa amafasitela ahlukile wesiphequluli emisebenzini ehlukile, ngokwesibonelo, lapho uvula amawindi ahlukile emisebenzini yomsebenzi, izintshisekelo zomuntu siqu, ezokuzijabulisa, okuqukethwe okubambezelekile, njll.
Igama liguqulwa entweni ethi "Ngeza isihloko sewindi" kumenyu yokuqukethwe ebonakala lapho uchofoza kwesokudla endaweni engenalutho kubha yethebhu.
Ngemuva kokuqamba kabusha igama kubha yesicelo, igama elikhethiwe liyaboniswa esikhundleni segama lesayithi lethebhu elisebenzayo, elingasiza lapho uvula amasayithi afanayo kumawindi ahlukene axhunyaniswe nama-akhawunti ahlukene. Isixhumanisi sigcinwa phakathi kwezikhathi futhi ngemuva kokuqalisa kabusha amawindi azobuyiselwa ngamagama akhethiwe.
Ngakolunye uhlangothi, ku Ngasohlangothini lwezokuphepha, iGoogle iyaqhubeka namasu ayo maqondana nokuqinisa ukuphepha kwesiphequluli sakho. Ukugcina ukuphepha nokuvikela ukuba sengozini, iGoogle imemezele ukwesekwa kwesici se-Intel's Flow Control Application Security (CET) ngesiphequluli sayo se-Chrome.
Lesi sici sokuphepha senzelwe ukuvikela idatha yomsebenzisi ekuhlaselweni kwe-Return-Oriented Programming (ROP) kanye ne-Jump Oriented Programming (JOP).
Lokhu kuhlaselaI-ROP ne-JOP ziyingozi futhi kunzima ukuzithola nokuzivikela ngoba ziguqula ukusebenza okujwayelekile kohlelo lokwenza ikhodi enonya. I-Intel isebenze ngenkuthalo neGoogle kanye nabanye ababambisene nabo embonini ukulwa nalezi zinhlobo zokuhlaselwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-CET njengomphelelisi wezixazululo ezazisetshenziswe ngaphambilini.
Olunye ushintsho oluhlobene nokuphepha ukusekelwa kwe- lukuhlukaniswa kwenethiwekhi ukuvikela izindlela zokulandela umkhondo yabasebenzisi phakathi kwamasayithi asuselwa kwisitoreji sezikhombi ezindaweni ezingahloselwe ukugcinwa unomphela kolwazi ("ama-Supercookies").
Ngoba izinsiza ezifakwe kunqolobane zigcinwa endaweni evamile yegama, kungakhathalekile isizinda somthombo, isiza esisodwa singanquma ukulayishwa kwemithombo yesinye isayithi ngokubheka ukuthi ngabe le nsiza ikunqolobane yini.
Ukuvikelwa kusekelwe ekusetshenzisweni kokuhlukaniswa kwenethiwekhi, ingqikithi yayo engeza ukuxhumeka kwamarekhodi wesizinda okwengeziwe kunqolobane eyabiwe lapho ikhasi eliyinhloko livula khona, likhawulela ubukhulu benqolobane yemibhalo yokulandelela ukunyakaza kuphela kusayithi lamanje (iskripthi se-iframe asikwazi ukuqinisekisa ukuthi insiza ilayishwe kusuka kwenye indawo). Izindleko zokuqhekeka zehlela ekusebenzeni okulondolozwe kwesikhashana,
Ngesikhathi wezinguquko ezigqame konjiniyela, singathola ifayela le- ukulungiselelwa kokusebenza kwezakhiwo "ezinhle kakhulu" (ngokwesibonelo, super.x), lapho kusetshenziswa khona i-cache eku-inthanethi. Ukusebenza kokusebenzisa i- "super" manje sekusondela kokufinyelela kuzakhiwo ezijwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wokulinganisela ukukhanyisa kweWebXR AR usuzinzile, okukuvumela ukuthi uchaze imingcele yokukhanyisa kuma-WebXR augmented reality sessions ukunika amamodeli ukubukeka okungokwemvelo nokuhlanganiswa okuhambisanayo nemvelo yomsebenzisi.
Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 90 kuLinux?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Chrome 90 iza nokuthuthuka kwamathebhu, ukuphepha nokuningi
I-FOS-P5: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-Facebook - Ingxenye 5